प्रधानमन्त्रीको सम्पति विवरणको समाचार पढ्दा लाज लाग्यो :सञ्चारकर्मी सम्झना - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
प्रधानमन्त्रीको सम्पति विवरणको समाचार पढ्दा लाज लाग्यो :सञ्चारकर्मी सम्झना
भर्खरै सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्बजनिक गरेको छ । जसअनुुसार बर्तमान प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइराला पछिकै नेपालका गरिब प्रधानमन्त्रीका रुपमा देखिएका छन् । उनले बुुझाएको विवरण इतिहासकै हास्यास्पद सम्पत्ती विवरण रहेको सबैतिरबाट टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।
लुटतन्त्र भित्र्याएर जति कमाएपनि यिनी अझै थाङ्ने अवस्थामा रहेछन, पैसा कमाएर सुकिला हुन अझैं बाँकि रहेछ ।म एउटा सञ्चारकर्मी अर्थात समाचारवाचिका पनि हुुँ । झुठा विवरण अर्थात प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सम्पति १ कठ्ठा जग्गा र ३ तोला सुन । यस्तो समाचार लाज त लागिरहेको थियो नै साथसाथै श्रोताले नपत्याएर झुटो समाचार बाचन गर्यो भनेर गालि गर्ने त हैनन भन्ने डरपनि लागेको थियो । हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री यती गरिव भन्दा विश्वमा हाम्रो छबी के ? बरु हामी सबै मिलेर १– १ रुपैया चन्दा उठाएर दिउ प्रधानमन्त्रीलाई ।
लम्पसारवादको पनि एक हद हुन्छ नि । बडो हास्यास्पद विवरण पेश गरे प्रधानमन्त्रीले जुन के जाति लाई भन्दा केलाई लाज भनेको जस्तो । यस्तो लागिराछ कि कोही मान्छे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल जस्तो दरिद्र हुन नपरोस् ।
अर्बौ कमाएर सम्पतिको नाममा ३ तोला सुन र १ कठ्ठा जमिन मात्र भन्ने त्यहि पनि पैतृक सम्पति रे । लाजिम्पाटको लाल दरवारको महिनाको लाखौं भाडा तिर्न पैसाको बोट कहाँ गयो । सम्पत्ति बिबरण हेर्दा सुन्दा तपाईँहरु पनि लज्जा महसूस भयो होला । प्रचण्डले नेपाली जनतालाई भेडा बाख्रा नै ठाने छन कि क्या हो ?
यदि प्रचण्डको सम्पति विवरण सहि हो भने नेपाल ग्यास कस्को ? १ अर्ब को शेयर कस्को ? भाटभटेनिको शेयर कस्को ? चन्द्रागिरी केबल कारको शेयर कस्को ? बानेश्वरको मुक्ति टावर कस्को ?
लाजिम्पाट को १६ करोड मूल्य बराबरको घर कस्को ? इटहरीको होटल गरिमाको सेयर कस्को ? बालाजुको मितेरी हस्पिटल र नोबेल हस्पिटलको शेयर कस्को ? स्वीस बैंकको ४ अर्ब कस्को ? पोखराको प्रकाश टावर कस्को ? अव प्रचण्डको सम्पति छानबिन गर्ने समय भएको छ ।
के नेपाली सबै भेडा हुुन् ? मैले जे भने पनि हुन्छ भन्ठान्नु भएको छ कि क्या हो ?अव प्रचण्ड र उनका आफन्तका नाममा भएको सम्पति खोजेर सार्वजनिकीकरण गर्नुुपर्ने भएको छ ।